Mero Report :: कृषिमा प्रकाशको ऊर्जा...
कृषिमा प्रकाशको ऊर्जा...
Apr 28, 2022 Thursday 11:23:53
म पाडा गोठमा गोबर सोर्दै छु है सर, तपाईँलाई ठ्याक्कै साढे सात बजे फोन गर्छु ।
आज दिनभरि नर्सरी तिरै भ्याई नभ्याई भयो, गोठको जिम्मा पनि आज मेरै छ क्या ।
‘हुन्छ प्रकाशजी काम सक्नुस् अनि भेटौँ है’"
नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का प्रकाश दुवाडीको दैनिक यस्तै गरी बित्छ । निकै व्यस्त मान्छे । बिहानदेखि बेलुकासम्म एक छिन फुर्सद हुन्न । कहिले नर्सरी, कहिले गोठ त कहिले चिस्यान केन्द्र चहार्दै उनको दिन बित्छ । भन्छन्,‘हिजोआज कृषि कर्ममै व्यस्त छु हजुर ।’
उमेरले भर्खर २७ टेकेका प्रकाशले कृषि विषयमा मास्टर्स गरेका छन् । भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, अफगानस्थानलगायत १३ देश त कृषि सिक्न र बुझ्नै पुगिसके रे । अहिले भने प्रकाश बिरुवा उत्पादनका लागि नीलकण्ठ–१२, साङ्कोषमा नर्सरी र पाडो पाडी पालन गरिरहेका छन् । आफ्नै थातथलो ज्वालामुखी–४, ढोलामाभने अदुवा र बेसार खेती गरेका छन् । उत्पादित वस्तु भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र पनि त्यही छ ।
साङ्कोषको नर्सरीसँगै बायोफ्लग प्रविधिको माछा पालन पनि सुरु गरेका छन् । त्यहीँनजिकै गँड्यौलाले मल (भर्मी कम्पोस्ट) उत्पादन हुन्छ । प्रकाशको दैनिकी साँच्चै कृषिमै बित्छ । उठेदेखि साँझसम्म । सायद उनका बा पनि कृषिमा यत्तिको भिजेका थिएनन् होला ? त्यसैले होला २१ औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा युवाका लागि प्रकाश उदाहरणीय ऊर्जा बनेका छन् । एसएलसी दिएपछि अमर उच्च मावि पटिहानी पुगेर १५ महिने जेटिए भेटेनरी पास गरे । नेपाल पालिटेक्निक इस्न्सिच्युट भरतपुरबाट प्लान्ट साइन्समा तीन वर्षे बाली विज्ञान (आईएससीएजी)गरे । बीएससीएजी पढ्न इलाम पुगेका उनले भारतको रामा युनिर्भसिटीबाट मास्टर्स इन हर्टिकल्चर गरेका छन् ।
कृषिमा नै डिग्रीसम्मको पढाइ हासिल गरेका प्रकाशले पढाइकै सिलसिलामा जहाँ जहाँ पुगे,कहीँ कहिल्यै खाली बसेनन् रे । चितवन बसेर आईएससीएजी पढ्दै गर्दा सुरुमा साइकलमा राखेर कुखुराको अण्डा र चल्ला बेच्थे । तेस्रो वर्ष पढ्दै गर्दा एउटा प्रोजेक्टमा जोडिए, जागिरे भएर । त्यो जागिरमा झन्डै एक लाख कमाएँ भन्छन् । व्यावसायिक सोचका प्रकाशलाई त्यही पैसा बिउ पुँजी भयो । प्रोजेक्टको जागिर छाडेर चितवनमा २ बिघा जग्गामा फूल खेती गरे । भन्छन्, ‘मेरो जीवनमा कृषि कर्म यहीबाट सुरु भयो ।’
बीएससीएजी पढ्न उनी इलाम पुगे । त्यहाँ पनि हात खाली बस्न सकेनन् र युनिक नर्सरी स्थापना गर्न भ्याए । सादा जीवन उच्च विचारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रकाश भन्छन्, ‘गरिब परिवारमा अभावै अभावले हुर्किएको मान्छे म, पढ्दै दुःख गर्दै कमाएको एक लाख लगानी अहिले साढे तीन करोड हाराहारी पुगेको छ ।’ न्यून वर्गीय परिवारमा हुर्किएका उनले स्कलरसिपमै विदेशको कृषि हेर्न पाए । कृषिमा काम गर्ने योजना पनि ल्याए । प्रकाशले गत तीन वर्षदेखि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा प्रारम्भ एग्रो कम्पनीको नामबाट कृषि तथा पशुपालनमा विभिन्न १४ विधामा काम गरिरहेका छन् ।
बिरुवा लिन मान्छेहरू नर्सरीमै पुग्छन् । बिरुवाको जात, उत्पादन प्रविधि र संरचनाअनुसार मूल्य पनि फरक हुन्छ । एउटा बिरुवालाई २५ रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ । केराको बिरुवा मात्रै वर्षमा ३० हजार बिक्री भएको गर्वसाथ सुनाउँछन् प्रकाश । पहाडी गाउँघरमा केराको बिक्री त त्यस्तो छ भने आँप, लिची, एभोगार्डाे, कागती, ड्राइगनफुड, भुइँकटहरजस्ता बिरुवाको कुरै नगरौँ । फलफूल, वन, घाँसजन्य गरी ७० भन्दा धेरै जातका बिरुवा नर्सरीमा छन् । प्रकाशको नर्सरीबाट प्रत्येक वर्षमा एक जातको बिरुवा कम्तीमा ५ हजार उत्पादन हुन्छ । साङ्कोषको नर्सरीभन्दा झन्डै एक किलोमिटर माथि पाडा पाडी फार्म छ । ज्वालामुखी– ४ ढोलामा ३६ रोपनी जग्गामा अदुवा र बेसार खेती । साङ्कोषको नर्सरी भएकै ठाउँमा गँड्यौला खेती पनि छ । ‘देख्नेले बालुवामा पानी खन्याएजस्तै ग¥यो, यत्रो पैसा खेर फाल्ने भयो भन्थे,’ उनी सम्झन्छन्,‘३ वर्षमा लगानीबाट आम्दानी हुन थालेको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट माग आउने गरेको छ । अहिले नर्सरीमा भएका घाँस, फलफूल, रुखका बिरुवाको बढी माग आउने गर्छ ।’
धादिङ सानो बजार भएकाले यहाँ मात्रै बजारीकरणले पुग्दैन । अरूभन्दा केही सस्तो गरेर भए पनि बजार बढाउने सोच उनको छ । भन्छन्,‘तत्काल लगानी उठेको त छैन बिस्तारै गर्दै जाने हो ।’ आफ्नो भविष्य यसैमा उज्ज्वल देखेको पनि उनले सुनाउन भुलेनन् ।
आफूले सुरु गरेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने अठोट छ उनमा । सबै फार्ममा गरी १४ जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । त्यसो त उनी कामलाई कहिल्यै सानो ठुलो ठान्दैनन् । कामदारसँगै सबै काममा उनी पनि जुटिरहेका हुन्छन् । उनको व्यवसाय नियाल्नेहरू भन्न थालेका छन् ‘यस्तो काम गरे पनि राम्रो हुने रहिछ त‘’ ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन तथा उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन एवं भण्डारणमा समेत प्रकाशको चासो छ । आफूले उत्पादन गरेको र गाउँका किसानले फलाएका तरकारी तथा फलफूलको भण्डारणका लागि ढोलामा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
बाली विज्ञान (आईएससीएजी) पढ्दै गरेका ७ जनाले अहिले नर्सरीमा इन्टर्न गरिरहेका छन् । यसै वर्ष यहाँबाट ३५ जनाले इन्टर्न गरे । ती विद्यार्थीले नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन, रोग कीरा व्यवस्थापन, मलको मात्रा मिलाउनेजस्ता कुरामा दक्षता हासिल गर्छन् ।
रोल्पाको नमुना मावि थप प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालयमा बाली विज्ञान पढेका ४ जना पनि इन्टर्न गरिरहेका छन् । यो नर्सरी विद्यार्थीको पनि रोजाइमा पर्छ । कालिकोटबाट इन्टर्न गर्न आएका लोकराज गिरी भन्छन्,‘अघिल्लो व्याजले यता राम्रो छ भन्यो, त्यसैले हामी पनि आयौँ ।’बिरुवाको ब्याड बनाउनेदेखि पशुपालनका लागि आवश्यक ज्ञान सिक्न पाउने भएकाले पनि विद्यार्थीको रोजाइ प्रकाश र उनको कृषि फार्म परेको छ ।
अघिल्लो वर्षका ३ जना इन्टर्न अहिले प्रारम्भ नर्सरीमै जागिर गर्छन् । पढेर जहाँ इन्टर्न गर्न आइपुगे त्यही जागिर पाउँदा मुगुका बलिराज रावल निकै खुसी छन् । उनी नर्सरीका म्यानेजर हुन् । माटोदेखि बिरुवासम्म रेखदेख गर्न सक्छिन् । भन्छन्,‘सुरुमा पढेर पनि यस्तो धुलो माटोमा काम गरिएला र ! जस्तो लाग्थ्यो अहिले यही प्यारो लाग्न थाल्यो ।’
प्रकाशले नर्सरीभित्रै एकापट्टि छेउमा माछा पालन गरिरहेका छन् । प्लास्टिकको घरभित्र बायोफ्लग प्रविधिको माछा पालन सुरु गरेको पनि वर्ष पूरा भयो । इन्डोनेसियाबाट सिकेर आफ्नै गाउँमा सुरु गरेको उनी बताउँछन् । ‘कृषिमा स्नातकोत्तर गर्दै गर्दा इन्टर्नका लागि ६ महिना इन्डोनेसिया पुगेको थिए, त्यहीको सीप बायोफ्लग प्रविधि यहाँ भित्र्याएँ,’ प्रकाशले सुनाए ।
एउटा घरभित्र ३ वटा प्लास्टिक पोखरी छ । एउटामा विभिन्न तीन जातका ३६ सय भुरा छन् । सुरुमा कमन कार्प, ग्रासकार्प, सिल्भरकार्प हालेका थिए । एक लट बेचिसकेर अर्काे लट पंगा जातका माछा हुर्काउँदै छन् प्रकाश । माछामा डेमोस्ट्रेशन गरिरहेको उनले सुनाए ।
कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आधुनिक नर्सरी स्थापनाअन्तर्गत ३५ लाख बराबर अनुदान लिए । बायोफ्लग प्रविधिको माछा पालनमा प्रदेश सरकारबाट २ लाख लिए । सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणको पनि उनले राम्रो सदुपयोग गरेका छन् ।
युवाको कृषि व्यवसायतिर मोह बढे पनि पहुँचका आधारमा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायले अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक किसान मारमा परेको उनको बुझाइ छ । प्रकाश भन्छन्, ‘राज्यका तर्फबाट अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेको छैन, मैले पनि कृषिमा भविष्य देखेर काम थालेको हुँ, पहुँचका आधारमा राज्यको अनुदान लिने प्रथा छ, झोलामा बोकेका फर्मले बर्सेनि अनुदान लिन्छन्, यस्ता प्रथा हटाउन सकियो भने मात्रै वास्तविक किसान आफ्नो पेसामा ऐक्यबद्ध हुनेछन् ।’
प्रकाशको फार्ममा अहिले साना ठुला गरी ३५ वटा पाडा पाडी छन् । पाडो हुर्किएपछि मासुका लागि बिक्री गर्छन्, पाडीलाई राँगो लगाएर महँगो मूल्यमा बेच्छन् ।
३ सय भैँसी पाल्ने र गोबरले गँड्यौला मल उत्पादन गरेर सहरी क्षेत्रमा हुने कौसी खेती गर्नेलाई बिक्री गर्ने योजना उनको छ । ‘प्राङ्गारिक खेती गर्ने किसान र कौसी खेती गर्नेहरूलाई यो अति नै उपयोगी हुन्छ, प्रकाश भन्छन्,‘यो मल नगनाउने र प्रायः सुख्खाजस्तो हुने हुँदा प्रयोग गर्न सजिलो हुने भएकाले सजिलै बिक्री हुन्छ ।’
उनको कृषि व्यवसाय कुनै ठुला व्यवसायीको चेन बिजनेसभन्दा कम छैन । भैँसीबाट गोबर उत्पादन, गोबरबाट गँड्यौला मल उत्पादन गर्छन् । त्यही मल नर्सरी अथवा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग गर्छन् । ‘भैँसीको गोबर नर्सरीमा प्रयोग गर्छु । नर्सरीबाट निस्किएको वस्तुहरू गँड्यौलालाई खुहाउँछु । खेतीमा उत्पादन भएको परालहरू भैँसीलाई खुवाउँछु’ आफ्नो व्यवसायबारेमा प्रकाशले सबैलाई यसरी नै बुझाउँछन् ।
‘धेरै धन कमाउने सपना बुनेर बिदेसिने युवाको भीडबाट भागेर स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने सपना देख्दै कृषिमा लागेको हुँ, उनी भन्छन्, ‘स्वदेशमा व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्न सके राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’